नेपाल लाइफले पारित गर्‍यो ५१ प्रतिशत लाभांशसहित शेयर खण्डिकरणको प्रस्ताव | Artha News Nepal
Home	बीमा	नेपाल लाइफले पारित गर्‍यो ५१ प्रतिशत लाभांशसहित शेयर खण्डिकरणको प्रस्ताव
काठमाडौं – नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रस्तावित ५१ प्रतिशत लाभांश र शेयर खण्डिकरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बुधवार वीरगञ्ज, पर्सामा २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी कम्पनीले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । यस कम्पनीले ३१ प्रतिशत बोनस शेयर र २० प्रतिशत नगद लाभांश दिन लागेको हो ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्यकै सर्वाधिक रू. ५ अर्ब ५० करोड चुक्तापूँजी भएको यस कम्पनीले नेपालको इतिहासमै शेयर खण्डिकरणको प्रकृया अघि बढाएको हो । कम्पनीले हाल कायम प्रतिशेयर मूल्य रू. १०० लाई घटाएर रू. ५० कायम गर्ने प्रस्ताव सभाबाट पारित गरेको हो ।
उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनको क्रममा नियामक निकायबाट स्वीकृति भएको कम्पनीको शेयरसंख्या दोब्बर हुनेछ । कम्पनीले पारित गरेको ३१ प्रतिशत बोनस शेयरपश्चात रू. ७ अर्ब १९ करोड चुक्तापूँजी पुग्नेछ । बोनस पश्चात कम्पनीको शेयर कित्ता ७ करोड १९ लाख कायम हुनेछ ।
शेयर खण्डिकरण प्रकृयाले पूर्णता पाए यो संख्या १४ करोड ३८ लाख हुनेछ । दोस्रो बजारमा सबै लगानीकर्ताको खरीद पहुँच पुर्‍याउने उदेश्यले शेयर खण्डिकरण गर्न लागेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । चुक्तापूँजी र बजार पूँजीकरणमा कुनै असर नपर्ने गरी कम्पनीले शेयर खण्डिकरण गर्न लागेको जानकारी दिएको हो ।
यस वर्ष बीमा कम्पनीहरुमध्यकै सर्वाधिक लाभांश पारित गरेको कम्पनीले लाभांश र साधारण सभा प्रयोजनका लागि माघ १४ देखि २८ गतेसम्म बुक कलोज गरेको छ । बुक क्लोजको आधारमा माघ १३ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र कम्पनीको लाभांश पाउनेछन् ।
नेपाल लाइफलाभांशशेयर खण्डिकरसाधारण सभा